ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: Gtalk မှာ Smiley လေးတွေ ထည့်ရအောင်
Gtalk မှာ Smiley လေးတွေ ထည့်ရအောင်
လူအများစု Smiley လေးတွေကို သဘောကျမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်ကတော့ အတော် သဘောကျပါတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းက ကျနော်တို့ အုပ်စုရဲ့ နာမည်က Funny Smile တဲ့။ လိုဂိုကတော့ Smiley ပုံလေးပေါ့။ တစ်နေ့က ကျနော်ရဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အမကြီး မချမ်း (မန်း) က ဂျီတော့ ကို အလှဆင်ဖို့ Smiley လည်းတွေ ထည့်နိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်လေး တစ်ခု လှမ်းပို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ Download ဒေါင်းလုတ် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီ Smiley လေးတွေနဲ့ဆို ခံစားချက်ကလေးတွေ ပို အသက်ဝင်မယ် ထင်တယ်။ သူ့ကို ခေါ်ဖို့ ကော်မန်းကတော့ ကျက်ရတော့ မှာပေါ့။ အခု ဒီအောက်မှာ သုံးလို့ ရတဲ့ ကော်မန်းလေးတွေ တန်းစီပြီး စာရင်းပြုစု ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီ ပရိုဂရမ်ကို ထည့်လိုက်ရင် All Programs >> DaSh >> MyTheme ထဲက Help.pdf ထဲမှာ လည်း သွားဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Program ကို Install လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် Gtalk ရဲ့ Setting ကို နည်းနည်း ၀င်ပြင် ရပါ့မယ်။ ဘာမှ မပြင်ခင် Chatting Window တွေကို ပိတ်ပေးပါ။ Gtalk Windows ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Setting ထဲကို ၀င်ရမယ်။ ပြီးရင် Appearance Tab ကို ရွေးရမယ်။ အဲဒီအထဲက Chat Theme မှာ MyTheme ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ကျနော်တို့ ပေါ်ချင်တဲ့ Smiley လေးတွေ သုံးလို့ ရပါပြီ။
နောက် Chatting Window ရဲ့ နောက်ခံပုံကို အဖြူပြောင်ကြီးနဲ့ မထားဘဲ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ပုံ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် All Programs >> DaSh >> MyTheme ထဲက Change Background ဆိုတာကို ရွေးပါ။ File ရွေးဖို့ Window ပေါ်လာရင် ကိုယ် ကြိုက်တဲ့ File ကို တင်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ အထူးသတိ ထားရမှာက ပုံဖိုင်ဟာ JPEG အမျိုးအစား ဖြစ်မှ အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Chatting Window တွေ ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် အသစ် ပြောင်းထားတဲ့ နောက်ခံပုံကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူပေါ်မယ့် ပုံလေးတွေက အတော် ချစ်စရာကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Program ကို ဒီမှာလည်း Download ယူလို့ ရပါတယ်။
Special thanks to my friend, Ma Chan (Mdl), for sharing this amazing program.
Description - Shortcut - Alternate Word
All the Best - - :atb
Angel - O:-) - :angel
Angry - X-( - :angry
Applause - =D - :clap
Bath - - :bath
Blushing - : -B - :blush
Broken Heart - =(( -
Call me - :c - :callme
Confused - :/ -
Cool - B-) - :cool
Crying - :(( - :waa
Day Dreaming - : -Y - :dream
Dislike - :PP - :naa
Do Not Disturb - - :dnd
Game - - :game
Ghoting - - :ghoting
Good Morning - - :gm
Good night - - :gn
Heart - - :heart
Hi - : -h - :hi, :hai
Hit - := -
Hug - - :hug
I am Mad - ~x( - :mad
I love you - - :ilu
I miss you - - :imu
Idea - - :idea
Kissing - : -* - :kiss
Laughing - :)) - :ha
Laughing - =)) - :haha
Love struck - :x - :love
Mess - - :mess
Movie - - :movie
Nail bitting(Jealous)- :SS - :j
News - - :news
No - |-: - :no
No - - :no
Not talking - ]-( - :calm
Now - - :now
On Phone - :)] - :call
Pray - - :pray
Raised Eyebrow - /:) - :cha
Sad - :( -
Secret/Silent - : -$ - :shh
Shut Up - - :shutup
Sleep - - :sleep
Sleepy - I-) - :zz
Smiling - :) -
Smug - - :mm
Sorry - - :sry
Stop shouting - : -T - :stop
Straight face - :| -
Surprised - :O - :oh
Take care - - :tc
Thanks - - :thanx
Thinking - : -? -
Tongue - :P -
Wait - =; - :wait
Waving, Bye - : -h - :bye
Winking - ;) -
Worried - : -S - :wor
Yahooooo - ||-) - :yahoo
Yes - - :yes
Sunday, November 11, 2007 | စာညှနျး How to
ဤပို့စ်အား Sunday, November 11, 2007 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး How to နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။